आमजनताको जीवन सुरक्षित पार्ने काम गरेकाे छु : मन्त्री गाेकर्ण विष्ट | mulkhabar.com
December 10, 2018 | 9:29 am 158 Hits
कार्यान्वयन त सुरु नै भइसक्यो । रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत हुन थालिसकेका छन् । हरेक दिन उत्साहका साथ सूचीकृत हुन आइरहेका छन् । कार्यान्वयनको सुरुको चरण भनेको रोजगारदाता सूचीकृत हुने र सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्र श्रमिकहरूको सूचीकरण गर्ने हो । त्यसपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत रहेको सञ्चालक समिति (जहाँ नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ)ले धेरै चरणमा छलफल गर्दै यी सबै विषयमा टुंगो लगाएको छ । हामीसँग सामाजिक सुरक्षा ऐन छ । नियमावली छ । कार्यविधि छ । त्यसका विभिन्न योजनाहरू छन् । यो सबै सन्दर्भको टुंगो त्रिपक्षीय साझेदारी र समझदारीका आधारमा लागेको हो । कार्यक्रमको शुभारम्भ अगाडि हामीले रोजगारदातालाई भेला गरेर हाम्रा समस्याहरू राख्ने, यो कार्यक्रमको जानकारी गराउने र उहाँहरूबाट प्रतिबद्धता लिने काम पनि गरेका छौँ ।
श्रम ऐनले काम सुरु गरेकै दिनदेखि श्रमिकको सञ्चयकोष र उपदानबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, कोष सञ्चालनमा नआएसम्म रोजगारदाताले नै त्यस्तो रकम छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्न सक्ने, कोष सञ्चालनमा आएको ६ महिनाभित्र सञ्चयकोषको रकम तथा दुई वर्षभित्र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तथा कोषहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा के भइरहेको छ ?
श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न कोषहरू छन् । कतिपय सन्दर्भमा बेग्लाबेग्लै ऐनहरू पनि छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकठाउँमा ल्याउने, ऐनलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेका छाैं । अहिले म यतिबेलै सबै एकीकृत हुन्छन् भनेर भन्न त सक्दिनँ । तर, विस्तारै सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई एकीकृत गर्ने, ऐनलाई एक ठाउँमा ल्याउने र एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ । यसप्रकारका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि हामीले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा हामी एकदमै नयाँ ढंगले अगाडि बढिरहेका छौँ । यसकारण यो विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही समय लाग्ला ।
श्रमिकहरूले जे योगदान गरेका छन्, त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा त उनीहरूले पाउँछन् नै । हरेक स्किमहरूमा पनि सर्त, प्रावधान, मापदण्ड उल्लेख छ । निरन्तरता भएन र ग्याप रहँदा के गर्ने, अर्को रोजागरीमा जाँदा के गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट छ । कोषमा योगदान गरेका श्रमिकहरू लाभबाट वञ्चित हुने कुनै पनि अवस्था देखानपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।
बोनससम्बन्धी कानुनअनुसार कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धित श्रमिकका लागि मात्र खर्च गरिने ऐनको व्यवस्था छ । यस्तो रकम २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । तर, कोषले त समग्रमै खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको र योगदान गर्ने श्रमिकको पहिचानमा पनि समस्या देखिएको छ नि ?
ठूला प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा यो कोषले थेग्न गार्‍हो पर्छ । त्यसको समाधान समग्र राज्यबाटै खोज्न जरुरी छ । ठूलो संख्यामा हुनेबाहेक व्यक्तिगत दुर्घटनाको सन्दर्भमा कहीँ समेट्नुपर्ने कुराहरू छन् भने त्यसलाई फेरि पनि सामयिक बनाउन सकिन्छ । यस सम्बन्धि कतिपय सन्दर्भमा ऐन, नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन गर्ने आवश्यकता पनि पर्न सक्छ । अधिकतम्भन्दा अधिकत श्रमिकहरूको हितमा फलदायी बनाउने सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिने छौँ ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूको त्रिपक्षीय समझदारीले नेपालको इतिहासकै धेरै ३९ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको हो । अधिकांश प्रतिष्ठानले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि रहन सक्छ । श्रम अडिट गर्दा केही ठाउँमा बाँकी रहेका उजुरीहरू पनि आएका छन् । सरकारको ध्यान गम्भीरताका साथ अकर्षित भएको छ । कार्यान्वयनका लागि सरकाले अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने काम पनि भइरहेको छ । त्यसका बाबजूद कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा सरकारले गम्भीरताका साथ कदमहरू अगाडि बढाउने छ । – नयाँ पत्रिकाबाट साभार
काठमाडौं, ११ असाेज – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदार युएई जाँदा शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था काे…